Richard Mille Replica | Daawashada been-abuurka ah 1: 1 Super Clone Vs Real Original Knockoff
Qaybaha / Qalabka
Tourbillon Winding Buugga
Dabaylaha Tooska ah ee Tourbillon
Hab-nololeedka Dabayllaha Tooska ah ee Duullimaadka Chronograph
Tourbillon kacsiga ee gacanta
Dabayl Toos ah oo Dheeraad ah
Dabayl Toos ah oo Qaybsan-ilbiriqsi Chronograph
Si Toos ah u Dabaylaha Adduunka
Gacmaha Dawakhsan ee Tooska ah
Alaarmiga gariiraya ee gacanta ee Winding Tourbillon ACJ
Buugga gacanta ee Yohan Blake
Dabaysha tooska ah ee dib u duulaysa ee Regatta
Qalin isha makaanikada ah
Buugga Winding Tourbillon Worldtimer Jean Todt
Buubba Watson ee gacanta
Buugga Winding Tourbillon Pharrell Williams
Dabaylaha Tooska ah ee Tourbillon McLaren Speedtail
Duulimaadyada Duullimaadka Chronograph ee Tooska ah
Duulimaadka Duulimaadka ee Dabaylaha ee Tourbillon Chronograph Manual
Dabayl Automatic ah
Buugga Winding Tourbillon G-sensor Sébastien Loeb
Rafael Nadal oo si Toos ah u Dabaylaya
Duulimaad Toos ah oo Dabaylaysan Chronograph Les Voiles de Saint Barth
Saacadda Duullimaadka Duullimaadka Tooska ah ee Dabaylaysan
Chronometer Waxqabadka Sare ee Gacanta
Dabaylo Toos ah oo leh Rotor la kala saari karo
Dabayl Toos ah Le Mans Classic
Dabaylo Toos ah oo leh Taariikh Weyn
Saacadda Dabaylaha Toos ah
Buugga Winding Tourbillon Rafael Nadal
Adventure Chronograph Tourbillon
Gacan-ku-wareejinta Tourbillon Chronograph-ka saacada
Gacan-ku-wareejinta Tourbillon Aerodyne
Ilaalada jeebka ee Tourbillon ee gacanta
Dabayl-Dabaysha Gacan-ku-haynta Tourbillon Dheeraad ah
Duullimaad Toos ah oo Dabaylaysa Chronograph GMT
Duulimaad Toos ah oo Dabaylaysan Chronograph Roberto Mancini
Sapphire Si Toos ah u Dabaylaysa
dhoobada midabaysan ee Tooska ah
Ku saabsan Richard Mille Replica
Richard Mille Replica maahan sida Patek Philippe, Vacheron Constantin, iyo noocyo kale oo leh waqti dheer roob iyo uruurinta farsamo. Kaliya wax ka yar 20 sano oo taariikh ah, waxay ku noolaan karaan safafka saacadaha ugu sarreeya waxaana raadinaya taajiriinta adduunka iyo kuwa caanka ah. Marka la eego, waa mid aan horay loo arag. Caan ka noqoshada noocaas ah, fikradda cusub ee aasaasaha lama kala saari karo. Laakiin ka sii muhiimsan, waxay isticmaashaa qalabka iyo teknoolojiyadda ugu horumarsan.
Qeyb weyn oo ka mid ah dhiirrigelinta Fake Richard Mille waxay ka timaaddaa tartanka iyo saameynta cilmi baarista iska caabinta. Codsiyada gaarka ah waxay suurtogal ka dhigeysaa in la hagaajiyo adkaanta saxanka hoose, la yareeyo khilaafaadka, oo la siiyo saacadda caabbinta saamaynta aadka u saraysa Fikradaha iyo agabyada ay dhiirrigelisay Formula One ayaa aasaaska u dhigay saacaddii ugu horreysay ee Richard Mille (RM 001), taas oo ka mid ah rukummada falsafadda astaanta.
Richard Mille Clone wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo duulimaadka, Formula One , iyo aaladaha teknolojiyada sare ee ugu fiican ee loo isticmaalo qalliinka saxda ah, sida fasalka 5 titanium, LITAL, carbon TPT, iyo graphene, si loo sameeyo saacado aad u fudud oo sax ah. Sidaa darteed ARCAP - walxaha leh astaamaheeda jir ahaaneed, oo ay ku jiraan daxalka iyo caabbinta astaamaha birlabta-ayaa loo adeegsaday markii ugu horreysay taariikhda RM daawashada 002
Richard Mille 1: 1 wuxuu iskaashi la sameeyay soo saaraha ugu caansan aduunka ee qalabka miisaanka udgoon ee miisaanka yar ee Teknolojiyada North Thin Ply  iyo mid sameeya caanaha soo saara si ay u soo saaraan kaarboon NTPT iyo quartz TPT RM 27-02 Rafael Nadal. Sida RM 11-03 McLaren. Richard Mille Tourbillon wuxuu qaadi karaa ilaa 1,000 qaybood dacwada dhumucdiisuna tahay kaliya 45 mm.
Moodooyinka ugu caansan ee astaanta ayaa ah tourbillon RM 008 (chronograph tourbillon) iyo safayr loo qaybiyay gacanta labaad (chronograph tourbillon). RM 008 wuxuu isku daraa dhaqdhaqaaq dalxiis oo leh hagitaan gacmeed, gacanta ilbiriqsiyo taariikhi ah, tilmaame isdabajoog ah, iyo awood. Tilmaamayaasha keydka. Waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah saacadaha ugu horumarsan adduunka, iyada oo qiimaha laga bilaabo 500,000 Euros. Caannimadiisa darteed, saacadan waxaa sidoo kale soo saaray soosaarayaasha waaweyn ee soosaarka, laakiin Richard Mille kaliya wuxuu ku kacayaa $ 699. Waxaa xusid mudan in qalabka loo isticmaalo saacadaha nuqul sidoo kale ay yihiin farsamada ugu horumarsan ee warshadaha.
Richard Mille Knockoff waa farshaxan heer sare ah. Qalabka ugu horumarsan ayaa ka dhigaya mid aan la burburin karin. Naqshaddooda gaarka ah, mustaqbalkooda mustaqbal waxay ka dhigeysaa iyaga mid ku habboon qof kasta oo saacad jecel oo raadinaya waxyaabo ka baxsan sanduuqa saacadda.
4 sababood oo looga iibsado saacad shabakadeena
Dhaqdhaqaaqa gudaha ee ugu horumarsan ee leh tourbillon, chronograph, ama shaqada GMT
Agabka kacaanka, iftiin iyo xoog Daabacaad khaas ah oo gaar ah ayaa laga yaabaa inay wax ku kordhiso
Saacado Fake Richard Mille Replica
Wax soo saarkayagu waxaa lagu sameeyaa Guangzhou, Shiinaha. Suuqa ugu weyn jumlada jumlada adduunka. richardmille.to ma leh khidmad qarsoon. 699 $ oo ay kujirto boostada, u rarida dhamaan qaybaha aduunka. Fadlan ogow inaan bixinno nooca ugu dambeeya, oo aan ahayn nooca jaban.
Fake Richard Mille Replica Watches, Kiisaska dhoobada sare iyo kuwa hoose ee dhoobada ah waxaa laga keenay Taiwan waxaana ka baaraandegaya ATPT ceramics si loo sameeyo Y-TZP dhoobada. Ka dib markii tiknoolajiyadda sare ee anti-faraha, waxay soo bandhigaan waxyaabo jilicsan oo jilicsan oo madow ah. Tayada midabkani isma beddelin boqol sano. Midabka iyo dhaldhalaalka ayaa aad u faahfaahsan si loo gaaro muuqaalka dhoobada muuqaalka electroplating qolalka kore iyo hoose ee aan dhammaad lahayn oo ku dhow alaabtii asalka ahayd, oo leh muraayad safayr ah oo ka-hortag ah! Cajaladdu waxay isticmaashaa suun jilicsan oo jilicsan oo Maleesiya laga soo dhoofiyo suunka kore, dhaqdhaqaaqa wuxuu ku qalabaysan yahay dhaqdhaqaaq Seiko NH ah oo la soo dejiyay Xarkaha noocani waxaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo cabbirka asalka ah iyo dhuuban, taas oo ka dhigaysa inay dareento raaxo iyo saaxiibtinimo, nooca ugu sarreeya suuqa Richard Mille Replica.